Union Minister U Kyaw Tin receives Republic of Serbia First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin received the Republic of Serbia First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Mr. Ivica Dacic at the Union Minister’s guest hall in Ministry of Foreign Affairs on 29 January 2019 afternoon.
During the meeting, the two sides exchanged views on exchanging high level visits, conducting regular coordination between the two foreign ministries, increasing bilateral cooperation in sports, education, news media and culture and regional and international matters were discussed.
After the meeting the Mutual Visa Exemption Agreement for Diplomatic and Official Passport Holders between Republic of the Union of Myanmar and Republic of Serbia was signed by Union Minister U Kyaw Tin and the Republic of Serbia First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Mr. Ivica Dacic.
The agreement will enable the holders of Diplomatic and Official Passports of the two countries to get the duration of stay not exceeding 90 days and will facilitate travel procedure for the holders.
Later in the afternoon Union Minister for International Cooperation hostedaluncheon to the delegation led by Republic of Serbia First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs at Park Royal Hotel, Nay Pyi Taw.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ivica Dacic အား ၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၄၃၀ နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံအကြား အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန် သွားရောက်ရန် စီစဉ်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပုံမှန်ကျင်းပသွားရေး၊ အားကစား၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ သတင်းမီဒီယာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ဆားဘီးယား သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့ အကြား သံတမန်နှင့် အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရေး သဘောတူစာချုပ်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ivica Dačić တို့မှ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
နေ့လယ်ပိုင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဆားဘီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်တွင် နေ့လယ်စာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။